Indawo ezolileyo, ibhafu eshushu, indawo yokugcina indalo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguWilliam
Ikhaya elihle elitsha elinendawo yokugcina indalo ngasemva. Yonwabela ikofu yakho yasekuseni kwidesika okanye kwibhafu eshushu kwaye ubukele amadada namarhanisi njengoko ebhabha echibini. Ininzi indawo yeentsapho ukuba isasazeke kwaye ininzi ukugcina abantwana benomdla kubandakanya i-wifi, iziko lokuzonwabisa, itafile ye-pool kwaye unokude ubambe iintlanzi echibini ngaphandle. Iibhedi ezimbini kunye neebhedi ezininzi ezitofotofo ezifanelekileyo kubantwana nakubantu abadala. Ngamanye amaxesha (anqabile) mna nomfazi wam siya kuba lapha, ngokunjalo, kodwa sibe nendawo yethu.
Yonke into entsha yile nto yenza ikhaya lethu libe lodwa. Imifanekiso ibalisa elona bali, ukuze ubone ukuba ufumana ntoni na. Into ongayiboniyo yindlela enoxolo kwaye intle ngayo ukuba nekomityi yekofu yasekuseni kwi-tub eshushu okanye indlela epholile ngayo ukuphosa nantoni na oyidlalayo kwifowuni yakho ngokuthe ngqo kumabonwakude kwigumbi lokuhlala. Ubuninzi betekhnoloji epholileyo kweli khaya, i-intanethi ekhawulezayo kunye nezinto eziluncedo zeprimiyamu zezona zenza esi sithuba "siphuculwe" xa kuthelekiswa nakuphi na ukuhlala kwa-Airbnb.
I-GreatLife gym ilungile ecaleni kwendlu, kunye ne-CJ Callaways kunye neNdlu yeBarrel zombini ezi ndawo zintle zokulunywa kunye ne-brew. Sikwakufuphi nebala lebhola lebhola lase-USF, igrosari ye-Hy-Vee kunye neWalgreens.
Asikho nje apha kwiinyanga zasehlotyeni, ngoko ke unxibelelwano luncinci.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sioux Falls